”ခဏလေးပဲ” “Be patient On ‘A Present Moment’ – Thabarwa Centre
”ခဏလေးပဲ” “Be patient On ‘A Present Moment’
“Be patient On ‘A Present Moment’ of discomfort”
(or) “Be the detachment on “A Present Moment” of comfort ”
We are in trouble because we cannot be patient onapresent moment of difficulty or discomfort. A present moment of pleasant mind is temporary, transient, and impermanent. Unpleasant mind is temporary, lasting foralittle while and impermanent too. Lazy mind also is temporary, transient, & impermanent. Enthusiastic mind is so. Happy or unhappy mind is so. Love or hatred mind is so. So is disliking or liking mind. Calm mind or Agitated mind is so. …………..
Continuity ofapresent moment each by each seems to beaperiod. Continuity ofaperiod each by each seems to be certain time. Continuity of certain time seems to bealife.
(Continuity ofapresent moment each by each seems to beasecond,
Continuity ofapresent second each by each seems to beaminute,
Continuity ofapresent minute each by each seems to be an hour,
Continuity ofapresent hour each by each seems to beaday,
Continuity ofapresent day each by each seems to beaweek,amonth,ayear andalife etc.)
We takealife as real existence or reality, then according to ascribing as bad life or good life, we generate craving(attaching) or aversion(rejecting) . According to attaching and rejecting, Clinging or grasping (Upadana) on good or bad arise. On account of clinging on good or bad, kammic energies (desire, fabrication) arise. On account of kammic energies, good or bad and ups or downs life arises again. …………….
IF WE CAN BE PATIENT or EQUANIMOUS or BE EXPERIENCE-ONLY onapresent moment each by each without attaching and rejecting and taking as reality (permanence), there will be no clinging, craving, aversion on good or bad life which appears to be alive due to taking asacontinuity ofapresent moment each by each.
On account of no more clinging, craving and aversion on good or bad moment or period or time or life, there will be no more kammic energies (desire and fabrication) but peaceful or equanimous or balanced or unbiased attitude or right understanding of the truth will arise.
(Based on the teaching of Sayadaw U Ottamasara and the article of Yaw Nwe)
ပစ္စုပ္ပန် တစ်ခဏလေး တွေကို သည်းမခံနိုင်လို့ ဒုက္ခရောက်ကြရတာပါ။
(မြဲမနေတဲ့သဘာဝလေးတွေ) ကို သည်းမခံနိုင်လို့ ဒုက္ခရောက်ကြရတာပါ။
ကျေနပ်တဲ့စိတ်လဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ ၊ မကျေနပ်တဲ့စိတ်လဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။
ပျင်းတဲ့စိတ်လဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။ ပျော်တဲ့စိတ်လဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။
ချစ်တဲ့စိတ်လဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။ မုန်းတဲ့စိတ်လဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။
စိတ်ဆိုးတာလဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။ ကြည်ဖြူတာလဲ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏပါပဲ။
– ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏလေးတွေမှ ပေါင်းပြီး တဆက်တည်းယူရာက ကာလတွေ အဖြစ်အဟုတ်ထင်လာရတယ်။
– ကာလလေးတွေ ပေါင်းပြီးတဆက်တည်း ယူရာက အချိန်၊ အချိန်လေးတွေ ပေါင်းပြီး တဆက်တည်းယူရာက – ဘဝအဖြစ် ထင်မှတ်လာရပါတယ်။
(ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏလေးတွေပေါင်းပြီး စက္ကန့် အဖြစ်ထင်လာရ၊ စက္ကန့်လေးတွေ ပေါင်းပြီး မိနစ်အဖြစ် မှတ်ထင်ရ၊ မိနစ်လေးတွေ တဆက်တည်းယူရမှ နာရီ အဖြစ် မှတ်ထင်ရ၊ နာရီတွေကို တဆက်တည်း ယူရက နေ့ရက်၊ လ၊ နှစ်၊ ဘ၀ စသည်ဖြင့် ထင်မှတ် လာရပါတယ်။)
ဘ၀တွေကို မြဲတဲ့အနေနဲ့ တကယ့်အရှိတရား အဖြစ် အတည်ယူ ဆုပ်ကိုင် အဟုတ်ထင်ရာကနေ –
အကောင်း-အဆိုး ဘ၀တွေကို တွေ့ကြုံရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ၊ ကောင်းသောဘ၀ဆိုလျှင် တွယ်လိုခြင်း- မကောင်းသောဘ၀ဆိုလျှင် ပယ်လိုခြင်း (ကျေနပ်သာယာခြင်း (သို့) မကျေမနပ်ဖြစ်နေခြင်း) စသည့်သဘောထားများဖြစ်လာရသည်။
အကောင်းအဆိုး ဘ၀ (သို့) အကောင်းအဆိုးတွ့ကြုံမှုများအပေါ် တကယ့်အရှိ၊ အဟုတ်ထင်မှတ်ရာက …..မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ဖယ်ရှားပစ်ချင်နေခြင်း(ဒေါသ)၊ ကျေနပ်သာယာကာ တွယ်တာနေခြင်း(လောဘ) တို့ ထပ်ဆင့်ဖြစ်လာရပါသည်။
ထိုမှတဆင့် ငြိတွယ်မှု၊ စွဲလန်းမှု၊ အဓိကထားမှု၊ ဆုပ်ကိုင်မှု၊ အတည်ယူမှု၊ အားထုတ်မှု၊ ကံသတ္တိ-ကမ္မစွမ်းအင် (ဥပါဒါန်၊ ကမ္မဘ၀) တို့ဖြစ်လာရပါတယ်။
အကျိုးပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ ကံသတ္တိ ကမ္မစွမ်းအင်ကနေ သတ္တဝါတွေကို အနိမ့်အမြင့် အဆိုး အကောင်းဆိုတာတွေ တဖန်ထပ်ဖြစ်စေပါတော့သည်။
အဆိုပါ ပစ္စုပ္ပန် တစ်ခဏ ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေတိုင်းကို-
မြဲတဲ့အနေနဲ့ အတည်မယူဘဲ၊ အဟုတ်မထင်ဘဲ၊ အဓိကထားငြိတွယ်မနေဘဲ၊ တွေ့ကြုံရုံသက်သက် ဖြစ်နေမည်ဆိုပါလျှင်. …
ကောင်းတဲ့ ပစ္စုပ္ပန် တစ်ခဏ ကိုလည်း အဟုတ်ထင် မငြိတွယ်ဘဲ၊ (မတွယ်ဘဲ)
ဆိုးတဲ့ ပစ္စုပ္ပန် တစ်ခဏ ကိုလည်း အဟုတ်ထင် မကျေမနပ်ဖြစ်မနေဘဲ၊ (မပယ်ဘဲ)
မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချလျှက် အကောင်းဖက်ပြောင်းအောင် ကြိုးစားလိုက်နိုင်ရင် အေးချမ်းမှုအစစ်၊ မျှတမှုအစစ်၊ အမှန်တရားကိုနားလည်မှုအစစ်၊ ချမ်းသာအစစ်၊ မြဲတဲ့သဘာဝအစစ် ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။
(ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရအဆုံးအမများနှင့် ယောနွယ်၏ စာများကို ကိုးကားပါသည်။)